NCS Mibvunzo yevaduku nevabereki / vatariri - Element Society
Ndekupi kwandingawana gwaro rekutakura?
Ndeipi purogiramu yangu ichaitika?
Ndinogona here kunyora kuNCS neshamwari dzangu?
Nhare dzefoni dzakabvumirwa paNCS here?
Ko vechidiki vanoda kuburitsa bhegi rinorara here?
Ndezvipi zvokudya zvinopiwa?
Iko rinotakura rondedzero rinowanikwa muNCS Summer / Autumn Guide yatinotumira kune vechidiki nevabereki vavo / vatariri vane nzvimbo dzakasimbiswa *. Tinotumira izvi panenge mwedzi mumwe chete kusati kwatanga purogiramu.
Kana usina kugamuchira yako NCS Summer / Autumn Guide ikozvino, iwe unogona kuvhara pachibvumirano chiri pasi apa kuti uone shanduro yepaIndaneti iyo inosanganisira pakutevedza urongwa.
Iwe unobvumirwa kuunza sutuketi imwe nehomwe rimwe bhagi newe. Chero mimwe midziyo inofanira kusara kumashure, saka tapota ugare mukati memutoro wemiganhu. Ndapota edza kuti usapedza kushandisa sutukesi yakakura pamusana pemuganhu usina kukwana.
Vechidiki havafaniri kuunza zvinhu zvakarambidzwa zvakadai sewaini, chero zvinodhaka zvisina kukodzera, zvinhu zvisiri pamutemo, penknives kana zvombo kuNCS. Tinokumbira vechidiki kuti varemekedze mitemo iyi sezvo kuchava nemigumisiro kana vakawanika kuti vane imwe yezvinhu izvi.
Ndapota cherechedza kuti hatigoni kuvhara zvinhu zvedu. Nokuda kwechikonzero ichi, tinokurudzira kuti usaunza zvinhu zvisingakoshi zvinodhura kana zvinhu zvinokosha.
Nhengo imwe neimwe yeCNN Program inoitika muUK.
Mumakore apfuura, vechidiki vakaenda kune dzimwe nzvimbo dzakadai saScotland, Cumbria, Kent uye Wales yePase 1 yepurogiramu.
Zvikamu 2 uye 3 zvinowanzowanikwa pedyo nenharaunda yomunharaunda, kazhinji pavanenge vachifamba kubva kumba kwavo kana kuchikoro, asi izvi zvinopesana uye vechidiki vangave vari kubva kumusha.
Tichaendesa nguva dzenguva nemamwe mashoko pamusoro penzvimbo chaiyo inenge mwedzi mumwe chete kutanga kwekutanga kwepurogiramu imwechete kana nzvimbo dzose dzakasimbiswa.
Vatori vechikamu vachada kuenda kune imwe nzvimbo yemusangano iyo inowanzo mukati kana pedyo nemunharaunda yavo. Tichazogadzirira kufamba kuenda nevaduku kune dzimwe nzvimbo dziri kure. Vechidiki nevabereki vavo kana vatarisi vane basa rekugadzirira kufamba kwavo kuenda kumisangano yemisangano uye kubva kumakudzo ekudzoka panguva dzakaratidzwa panguva yavo.
Vechidiki vanogona kusayina neshamwari, uye kana vakakumbira zuva rimwe chete munzvimbo imwechete uye vasarudza imwechete yeChikoro 2 unyanzvi, vane mukanano wakanaka wokuva purogiramu imwe chete. Kana vese vanyora zvese, vechidiki vanogona kutisangana nesu tichikumbira kuti tive purogiramu imwe chete kana kuti tigovana mukana. Tichada kuziva mazita emumwe nomumwe shamwari uye isu tichazoita zvatinogona kuti tifunge izvi. Kunyange zvazvo tisingakwanisi kuisa chivimbo ichi, kusainira mangwanani kuchawedzera mikana yavo!
NCS inzira yakanaka yekusangana nevanhu vatsva uye kuita shamwari itsva! Tarisa video yedu pano.
Vechidiki vakawanda vanoona kuti kunyange zvazvo vakaiswa kune rimwe boka kana shanduko kubva kune shamwari dzavo, purogiramu yacho inokweretesa kusangana nevanhu vatsva kuburikidza nemabasa ekuvakwa kwechikwata uye kuti mukuru wavo mutevedzeri munhu mukuru kuvimba pavasina chokwadi. Tinongobvumira imwe nhamba yevechidiki kubva kuchikoro chipi nechipi purogiramu imwe neimwe, uye naizvozvo purogiramu ichava yokutanga vechidiki vakawanda vanosangana. Munharaunda yose, uye kunyanya pakutanga, kuchava nemitambo yematambo akawanda uye zvikepe zvechando kuti vaone kuti munhu wose anoziva vamwe vechidiki vari muboka ravo.
Mukuwedzera, vechidiki vakawanda vanoti chimwe chezvikamu zvakanakisisa zvehurongwa hweNCS chaiva kusangana nevanhu vazhinji vatsva nekuita shamwari itsva. Dzvanya pano kuti uone zvimwe zvezviitiko zvedu zvepakutanga. Hatikwanise kupa ruzivo pamusoro pechipi chechidiki vechidiki vachaiswa mukati, sezvo mapoka ega purogiramu ega anongoratidzwa mazuva mashomanana asati atanga purogiramu zuva. Vechidiki vachawana kuti vatambi vemupi muzuva rokutanga regurogiramu.
Ndapota cherechedza kuti nzvimbo yekugara paCSS isati yaroga uye saka hatigoni kubvumira zvikumbiro zvekugoverana kwevamwe vechidiki vevarume vakasiyana.
Nhare dzefoni dzinobvumirwa purogiramu yeNCS here?
Vechidiki vanobvumirwa kuuya nefoni dzavo (uye mabheji) pamwe chete navo purogiramu yeCSS uye vachakwanisa kuishandisa kana mabasa asiri kuitika (kushandisa shanhare panguva yenguva yekuita haibvumirwi). Ndapota cherechedza kuti pane nguva dzisingagone kugamuchirwa foni, kunyanya panguva yePase 1 iyo inowanzogara mumaruwa.
Nzvimbo dzose dzekugara kwedu dzinouya nezvinhu zvinodikanwa, zvakadai sokusvika kune zvigaro zvemasimba, mvura inonaya, nezvimwe zvisinei nokuti rudzi rwekugara pane imwe purogiramu yavo, vatori vechikamu vachave nekuwana zvigaro zvemhepo uye saka vanofanira kukwanisa kutengesa mafoni avo. Kuwanika kunogona kunge kwakanyanya kunzvimbo dzekugara dzetende.
Ndapota cherechedza kuti hatigoni kuvhara zvinhu zvedu zvevanhu vaduku vaduku vanounza foni dzavo vachizviita pangozi yavo pachavo.
Kwete, vechidiki havadi kuti vauye nehombodo yehope. Zvose zvekugara kwedu zvinouya nemabhedha, kusanganisira nzvimbo dzekugara dzakagadzirwa uye yurts. Isu tinopawo nhovo yemusasa weusiku wega wega wevanhu vaduku vanoitawo muChikamu 1.
Zvokudya zvose nekumwa zvichagoverwa panguva dzekugara zvikamu zvepurogiramu (apo vechidiki vari kugara kure nemusha). Iwe chete unoda kuuya nechingwa chakasungirirwa kwezuva rokutanga rePasisi 1 (uye Phase 2 zvichienderana nezvirongwa, tapota tarisai nguva yako).
Chero bedzi takaziviswa nezvido zvemudiki wepamberi, tinogona kupa zvakanyanya zvokudya zvekudya zvinodiwa, kusanganisira halal, kosher, vegetarian, vegan, uye zvokudya zveguten, uye zvekudya zvakasiyana siyana zvekudya. Heano mienzaniso yezvokudya zvinowanikwa munguva dzekugara. Zvisarudzo zvichasiyana:
Phase 1 (kugara):
Ndapota uyai nemabiko ezvokudya zvezuva rokutanga. Zvokudya zvepamusoro-soro zvinopiwa ipapo nekunze kwekuita basa.
Chikudya chamangwanani: kudya, kudya kwekudya, porridge
Mabiko: sandwiches, crisps, michero
Kudya: zvokudya zvinopisa (semu pasta, pizza, curry, chiri), saladi, dessert
Phase 2 (kugara)
Chengetedza nguva yako yekuona kana iwe uchida kuuya nechingwa chakasara kwezuva rokutanga. Zvokudya zvinobva zvagoverwa neThe Challenge uye vechidiki vangave vachizvigadzirira ivo sechikamu chehupenyu hwavo hwekuzvimiririra.
Chikudya chamangwanani: kudya, mbiriso
Kudya: kusarudzwa kwezvokudya zvinopisa zvakasarudzwa uye zvakabikwa sechikwata (sausages uye mbatata yakashambadza, kushamisira-fry, pizza)
Phase 3 (isina-kugara)
Ndapota tauya rako roga roga. Zvokudya hazvipi.
Nokuda kwepurogiramu mapurogiramu
Phase 1 (kugara)
Zvikamu 2 uye 3 (mazuva okuita, kugara mumba pamba)
Ndeipi iyo vacheche vacharara munguva dzekugara?
Chii chinoitika paIndaneti Evening?
Inotora zvakadini kutora chikamu muNCS?
Ko vamwe vechidiki vanoenda purogiramu vane unhu hwakaoma here?
Ndivanaani vachave vatungamiri vechidiki pasi?
Ko kutora chikamu muNCS kunopindira nevechidiki vandinodzidza?
Ndinoita sei kuti mwana wangu aite zvekuita?
Kune nzvimbo dzakasiyana-siyana dzekugara dzinowanika panguva yeCSS (semuenzaniso makamuri edzimba akaparadzaniswa, matende, yurts, zvichingodaro), uye nzvimbo yakatarwa ichasiyana nehurongwa. Tsanangudzo yekugara uye nzvimbo yepurogiramu imwe neimwe inotumirwa kune vatori vechikamu anenge mwedzi imwe isati yatanga purogiramu yekutanga.
Nzvimbo yekugara inochengetedzwa nechekuchengetedzwa kwekunze kwekuita basa, yunivhesiti campus kana imwe mutezi wekugara uye pane zvinhu zvekuchengetedza munzvimbo iyo kuchengetedza vagari varo sevanokuchengetedza sezvinobvira. Vakaroorana nevarume nevakadzi vanoparadzana muimba yevarume vasina kukwana uye havabvumirwi kupinda mumakamuri eumwe neumwe.
Horozi dzinouya nemishonga anodiwa zvakadai sokusvika kumvura uye zvigadziko zvine simba. Imwe nzvimbo yekugara, kusanganisira dzimba dzokugeza, inogona kugoverana nevamwe vechidiki asi inongova nevatori vechikadzi chete.
Kunyange pasina nguva yakatarwa iyo vechidiki vanoda kubatwa nehope, vose vaduku vanofanira kunge vari muimba yavo pachavo ne 10.45pm. Tinokurudzira kuti vechidiki vawane huro hwakanaka hweusiku kuti vaone kuti vanofarira zvizere mabasa anotevera mazuva!
Pamapurogiramu anotanga munguva dzezororo zhizha:
Munguva yeChitatu 1, vechidiki vanogara pane imwe nzvimbo yekuvhima kwekunze mumaruwa. Mhando yekugara ingasiyana. Inogona kuva matumba, nehusiku husiku hwekudzika musasa, asi inogona kuva matende kana yurts. Zvinyorwa zvepurogiramu imwe neimwe zvichaendeswa kuvatori vechikamu anenge mwedzi imwe isati yasvika.
Munguva yeChitatu 2, vechidiki vachaona kuzvimirira vachigara kunze kwemba uye vachibika zvokudya zvavo pachavo. Zvakare, zvirongwa zvekugara zvinogona kusiyana (somuenzaniso, zvingave nzvimbo yekugara yunivhesiti kana matende kana yurts), uye zvinyorwa zvepurogiramu imwe neimwe zvichaendeswa kuvatori vechikamu anenge mwedzi imwe isati yatanga purogiramu yekutanga. Munguva yeChitatu 3, vechiduku vacharamba vari pamba usiku humwe.
Pamapurogiramu anotanga munguva yehafu yemakore:
Munguva yeChitatu 1, vechidiki vacharamba vari kunze kwekuchengetedza basa mumaruwa. Mhando yekugara ingasiyana. Inogona kuva matumba, nehusiku husiku hwekudzika musasa, kana inogona kuva yurts (kutenderera matende), kana kuti nzvimbo dzetende. Zvinyorwa zvepurogiramu imwe neimwe zvichaendeswa kuvatori vechikamu anenge mwedzi imwe isati yasvika. Zvinhu zvose zvinodiwa, zvakadai semvura uye zvigaro zvemasimba, zvichawanikwa. Pakati pezvimwe zvepurogiramu (Phase 2 ne3), vechidiki vacharamba vari pamba usiku humwe.
Mashoko eMvura manheru ndiwo mukana wevatori vechikamu nevabereki kana vatariri kuwana ruzivo rwakanyanya pamusoro peCSS uye kubvunza chero mibvunzo yavangave nayo pamusoro pegurogiramu. Ikowo mukana wekuti vasangane nevamwe vechidiki vanozove vachiitawo purogiramu imwechete, uye vabereki vavo kana vatarisi.
Tichakutumira iwe kukokwa kweNhau yeZuva panguva iyo nzvimbo inosimbiswa. Inowanzoitwa mavhiki e2 purogiramu isati yatanga. Tinokurudzira kuti iwe unopinda sezvo vatori vechikamu vasati vamboona zvichibatsira zvikuru, hazvireereri kunyange zvakadaro. Chero mamiriro ose ezvinhu, tichakutumira tsanangudzo yeChizha / yeAugust yakawanda mwedzi mumwe chete purogiramu isati yatanga zuva ne email kana nepositi, kazhinji zvichienderana nekunakidzwa kusarudzwa pachigadziro.
Tinotenda kuti vose vakakodzera 15-17 vezera remakore vanofanirwa kutora chikamu muNCS uye inokosha kwazvo mari. Hurumende inoshandisa mari yePound 1,000 mumwe wevatori vechikamu kuitira kuti tive nechokwadi chekuti chirongwa chacho hachibhadhara iwe kupfuura $ 50 mubhadharo wekutonga, pasinei nokuti unoshandisa NCS The Challenge kana NCS Trust. Vaparidzi vanopedza nguva kure nemusha nemabasa ose akafukidzirwa. Izvi zvinosanganisira pokugara, zvokudya (kana pane imwe nzvimbo yekugara) nemichina.
Tinowanzopa zvipo zvakakosha zvezvikoro zvatinoshanyira. Kana iwe uine mibvunzo ine chokuita nerubatsiro rwemari kana kubhadhara tapota taura nesu.
Dambudziko racho rinotarisira kutsigira avo vane maitiro akaoma kuvabvumira kutora chikamu uye kuwana zvakanakisisa kubva kune NCS.
Sezvo kuchengetedzwa ndiko kunyanya kunetseka kwedu, tinongororera svondo rega yega yega, kunyanya kunyatsoteerera ruzivo rwezvokurapa nehutsigiro rwakapiwa.
Kana takaziviswa kuti wechiduku ane dambudziko rekutevera mitemo yakajeka nemiganhu, tichaonana nemubereki kana mutariri kuzokurukura izvi. Mune zvimwe zviitiko tinosangana nezvikoro, vashandi kana vamwe vadzidzisi kuti vawane mamwe mashoko. Isu tinouya pane chisarudzo pamusoro pomunhu wechidiki uye kutsigira kwakadini kwavanoda paNCS. Kana zvichidikanwa, tichaisa vatsigiri vashandi vakawanda panzvimbo yeiyo mudiki.
Muzviitiko zvose, tichaita kuti vashandi vakakodzera vaone chero nzira ipi zvayo yakaoma kuitira kuti vatsigire munhu wechidiki, uye boka rose. Isuwo tinewo maitiro ekufambisa. Tinotsanangurira izvi kune vechidiki pakutanga kwepurogiramu uye tinotarisira kuti vatevere. Nhamba yehufambiro ine mimwe mitemo pamusoro pemafambiro atinotarisira purogiramu, kusanganisira mitemo yekuchengetedza, mutemo, nekuremekedza uye kusanganisira vamwe vanhu.
Kana wechidiki akakurumidza kuputsa mutemo wekufambisa, vashandi vanoongorora mamiriro acho ezvinhu uye vanosarudza pane zvakakosha zvikuru. Mune zvimwe zviitiko, tinogona kukumbira wechidiki kuti abve purogiramu.
Kuchengetedzwa uye hupenyu hwevatori vechikamu hunokosha. NCS inoparidzirwa muEngland neNorthern Ireland nekubatana kwezviitiko zvevechidiki nemasangano emunharaunda kusanganisira zvipo, zvikoro zvekugadzirira, basa rekuzvipira, sangano, vhizinesi rezvemagariro evanhu (VCSE) uye hurumende inobatanidzwa. Vashandi veNCS vakaongorora DBS (kare kare CRB) uye vane mazano akakodzera okushanda nevaduku.
Zvose izvi zvinonzwisisika zvengozi-kuongororwa uye kutarisirwa nekunyatsosarudzwa vadzidzisi vakarovedzwa uye vadzidzisi uye chirongwa chacho chinonyatsosimbiswa munzvimbo uye munyika.
Kutora chikamu muNCS kunopindira neongororo dzangu dzevechidiki?
Kwete. Purogiramu yeCNS yechando inoitika mumazororo ezhizha. Yedu shomanana yekuvhuvhura uye mapurogiramu emvura anogona kuitika chero ipi zvayo mukati mekuvhuvhuta kana mutambo kwehafu yenguva yezororo.
Purogiramu yeCNS yechando inoitika mumazororo ezhizha. Yedu shomanana yekuvhuvhura uye mapurogiramu emvura anogona kuitika chero ipi zvayo mukati mekuvhuvhuta kana mutambo kwehafu yenguva yezororo.
Ndinoita sei kuti mwana wangu anoshanda?
Vechidiki vako vanogona kunyoresa chido chavo chekutora chikamu kuburikidza nekushandisa peji yepamusoro peji rewebhu redu kana kudana 0114 2999 210 kana kutumira e-mail mutungamiri wedu weCNS, Richard pa richard.r@element.li
Kamwe kubhadhara kwapera, tichakutumira mamwe mashoko pamusoro peprojekti chaiyo yavakanyoresa.